China L21201-ST66 4X mpanamboatra treble hook matanjaka | mpamatsy | KONA
L21201-ST66 4X Vatody mahery matanjaka
Item lah. #: L21201 (ST66)
Famaritana: Ao amin'ny andalana 4X Strong Treble Hook
Size: 8 # 6 # 4 # 2 # 1 # 1/0 # 2/0 # 3/0 # 4/0 # 5/0 #
Fonosana: famonosana betsaka na namboarina ao anaty boaty PET na fonosana blister.
Ity hook KONA 4X matanjaka treble ity dia namboarina avy amin'ny vy tsara karbaona. Ary ny fanoherana ny harafesina tafahoatra.
Noho ny vidin'ny fifaninanana, ny tanjaka ary ny maranitra, io no safidy tsara ho an'ireo mpanao jono sy mpanjono.
Miaraka amin'ny habe marobe, ao anatin'izany ny 8 6 4 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0, ny maodely KONA L21201 no lozabe malaza indrindra ho an'ny tsena any ivelany. Io dia ahafahanao manolo ireo tadin-dokanga tany am-boalohany ireo hetaheta tianao miaraka amin'ny lalao sy ny habe ary ny tanjaka ary tsy manimba ny hetsika tany am-boalohany ny fisokafanao.
Fiadiana amin'ny harafesina avo lenta ho an'ny famaranana maharitra ela indrindra / mainty / nikela / mena eo amin'ny tsenan-dranomasina misy farango maranitra maranitra sy dingana maro. Mora sy mahavokatra ho an'ny mpanjono ny manjono ao anaty ranomasina. Indrindra ho an'ny trondro lehibe.
4X Treble Hook mahery: namboarina ho fandrefesana mavesatra sy farango lehibe mba hiadiana ho an'ny trondro trondro ranomasina, karazan-trondro sy walleye, saika tsy vaky.
Snagging Hook: ny tombo-kase tsy manam-paharoa manidy ny trondro ho kiho, indray mandeha voahidy, ka tsy afaka very ny hazandranoo.
Maranitra maranitra: farango maranitra 4X mavesatra manasongadina tendrony amin'ny tendrony maranitra miaraka amin'ny faharetana, ampy hery hijanonany mafy ao am-bavan'ny trondro lehibe iray, tsy afa-mandositra.
Izy io dia tsy maintsy ananananao hooks ho an'ny mpihaza, ary manana fahaizana mifehy tsara sy tanjaka miavaka.
Ny famolavolana vatana nofongarina sy matevina kokoa dia manome toky ny tanjaky ny farango, toro-marika 3 amin'ny barabao, afaka manantona ireo trondro amin'ny zoro maro kokoa, manampy amin'ny fisamborana mora kokoa, fitaovana mety tsara amin'ny fanjonoana manjono.
habe: 8,6,4,2,1,1 / 0,2 / 0, 3/0, 4 / 0,5 / 0. fonosana lehibe, fonosana blister na fonosana boaty PET. Anjaranao izany.
Azo ampiharina amin'ny karazan-trondro fisintomana rehetra:
Raha misy singa iray amin'ny fikandrana angling anao rehetra izay tsy maintsy ahalalanao tsara dia ny farango. Ary tsy miondrika tapa-by fotsiny.
Azafady tsindrio eto ambany raha te hahalala bebe kokoa momba ny hook treble mahery isan-karazany:
ST36 1X faribolana matanjaka boribory boribory mahery
ST46 2X Fehin-tratra miondrika mitsimoka
L21301-ST56 3X Tady mafy telo-mahery
Teo aloha: L20801-ST31 1X boribory matanjaka boribory boribory misy teboka mibontsina
Manaraka: L21301-ST56 3X Tady mafy telo-mahery
Vatokely fikandrana ho an'ny lures
L10701 HOOK avo roa heny
L14501 HOOK avo roa heny
L14201 HOOK avo roa heny
L20701-ST41 2X kofehy mahery vaika amin'ny fanerena ...
L12901 HOOK avo roa heny